Bashannana Archives - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Abdiisaa - Oct 4, 2015
Admin - Sep 14, 2015
Admin - Apr 1, 2015
Admin - Feb 8, 2015
Taphni viidiyoo dandeettii dafanii waabarachuu nama gonfachiisa
Tapha viidiyoo (action video game) taphachuun muuxxannoo taphichaa horachuu qofa irratti akka hindaangofne qorannoon mul’ise. Tapha viidiyoo taphachuun wolumaagalatti dandeetti dafanii waa barachuus akka...
Paaspoortiin keessan hagam humnaqabeessa?
Humna hagam paaspoortiin harkaa qabdan ykn biyya keessanii akka qabu baruu feetuu? Finlaand, Siwiidin, UK Afgaanistaan, Iraaq fi Somaaliyaan Itoophiyaan jalaa ol 20ffaa irra jirti. Kan...
Fiilmiin Ajaa’iba jedhamu Gurraandhala 2015 bayuuf jira
Admin - Nov 17, 2014 1
Gama guddina aartii Afaan Oromootiin wontoonni gaggaarii fi kanneen nama abdachiisan hedduun mudhataa jiru. Barreeffamaa fi sirbaan alatti, hojiin fiilmii Afaan Oromoo bara kana...
Fiilmiin Asaantii Sadaasaa 15 Minisootatti Eebbifame
Fiilmiin haarawa Afaan Oromo Asaantii jedhamu dhuma baatii kanaa irratti biyya Ameerikaa magaalaa Minisootatti Sadaasaa 28 fi 29 galma tiyaatiraa keessatti ummatatti akka agarsiifamu...